Cali Cabdalla Saalix oo Cidlo Lagu Dilay. – Warsan iyo Weeedh Saxsan oo Sugan.
Yemen(FMN)—Madaxweynihii hore ee dalkaasi yemen mudada dheer xukkumi jiray,Cali cabdala saalax ayaa lasoo warinayaa in ay dileen kooxaha xuutiyiinta ee ka dagaalama dalkaasi yemen oo ay xur guf adagi dhex taalo xulafa uu sacuudigu hoggaaminayo.
Wararkii ugu danbeeyay ee laga helay dalkaasi ayaa aad umuujinaya suurta galnimada dilka Madaxweyne;Cali cabdala Saalix oo mudooyinkii danbe uu khilaaf ba’ani kala dhaxeeyay kooxaha Xuuthiyiinta looyaqaano ee gacan saarka la leh Dawlada Iiraan.
baraha bulshadu ay ku wada xidhiidho ayaa lagu arkayay sawiro iyo muuqaalo muujinay maydka madaxweynahaasi hore oo wajigiisa ay ka muuqdaan dhaawacyo iyo nabaro cul culus oo umuuqda kuwii uu ugeeriyooday.
Sikastaba ha ahaatee,wali si dhab ah looma xaqiijinin dilka ninkaas,waxaana aan sidoo kale la hayn wax muujinaya muuqaalka Mudane;Saalix oo fayoow oo hadlaya taas oo sii kordhinaysa shakiga laga qabo inuu ku geeriyooday gacanta xuutiyiinta
Previous Previous post: Shirweyne Arimaha Ammaanka Looga Hadlayo Oo Muqdisho Ka Furmay.
Next Next post: Shirweynihii Muqdisho Oo Lasoo Gabagabeeyay.